Sharaxaadda kooban ee Jack iyo qoraallada
jaakadu waa sare u qaadida wax yar (in ka yar 1 m) oo ah qalabka dhifashada ugu fudud. Waxay leedahay laba nooc oo makaanik ah iyo nooc hydraulic ah. jaakada mashiinka ah waxay laabaysaa baaldi kale iyo laba, sababta oo ah culeyska ka imanaya dadaal yar oo hawlgal ah, guud ahaan waxaa loo isticmaalaa shaqada dayactirka makaanikada ee dhismayaasha ...
Lever block astaamo u gaar ah iyo
lever hoist waa mashiin culeys fudud oo fudud oo fudud. waxay leedahay qaab dhismeedka is haysta, mug yar, iftiin culeys, la qaadi karo, iyo waxqabad deggan. waxay u shaqeysaa labo labo labo ah oo isku haysa isku hagis ah, waxay lamid tahay labada xarig ee kale ee isku xirta xarkaha birta xarkaha ee dhaqdhaqaaqa, sidaa darteed ...
CD iyo MD Korantada kor u qaadaysa isticmaalka iyo
(a) U isticmaal CD iyo md korantada korantada (gourd) si loogu rakibo dariiqa dusha sare ee toosan (toosan, qalooca) ama ku dheji xarkaha, kor u qaadida culeysyo kaladuwan. had iyo jeer leh garka keliya hal korantada, labalaab labalaab ah oo korantada dusheeda ah, wiish xeedho leh iwm. si balaadhan looga isticmaalo warshadaha, miinooyinka, r ...
Adeegso silsiladaha silsiladaha
waxaa maamula 20-02-21
Furaha xudunta: silsiladaha silsiladaha ayaa kor u qaadaya qalabka kor loogu qaado inta badan inta badan lagu isticmaalo gudaha aaladaha aasaasiga ah, guud ahaan lagu dabaqi karo kiis aan lahayn awood dibadeed oo kor u qaadista qalabka dhifashada weyn ayaa ka dhigaysa shaqada mid waqti badbaadinaysa waqti iyo dadaal. gaar ahaan, qaar ka mid ah shuruudaha ka sii saxsan ee deegaanka, hidde ...